Kismaayo News » Tirakoobyada qaraxyaddii Alshabaab ay geysatay
Tirakoobyada qaraxyaddii Alshabaab ay geysatay
Kn: Halkan waxaan kusoo koobeynaa tirakoobka qaraxyaddii Alshabaab ay geysatay tan iyo sanadkii 2009kii.
Feberaayo, 22, 2009 : Qof naftiisa miidaamiyey ayaa isku qarxiyey meel ay joogeen ciidamada AMISOM ee Burundi ka socda, waxaa qaraxa lagu diley 11 qof. Alshabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda
Juun 18, 2009: Qof naftiisa soo miidaamiyey ayaa isku qarxiyey hoteel ku yaala magaalada Baladweyne, halkaasina waxaa ku dhintey wasiirkii amaanka DKMG ah Col. Cumar Xaashi iyo 24 qof oo kale oo odayo dhaqameedyo ay ka midyihiin.
Sebtember 17, 2009: Labbo qarax oo ismiidaamin ah oo lagag eegtey xarunta AMISOM ee caasimadda ayaa waxaa ku dhintey 21 qof, una badnaa ciidamada Afrikaanka, Shabaabka oo sheegtey mas’uuliyadda qaraxaasi ayaa sheegey in weerarkaasi uu ahaa aargoosi ku wajahnaa weerar xagga cirka ah oo Maraykanka uu ku diley Saalax Nabhaan (14kii september 2009), Sheekh Barre Qooje oo ahaa sargaal ka tirsan Alshabaab oo Gedo ku sugnaa ayaa sheegey in ay ka aargudan doonaan dilka Nabhaan, maalmo kadibna waxaa dhacay qaraxyada xarunta AMISOM ee Xalane, kadibna afayeenka Shabaabka ayaa sheegey in uu ahaa aargudasho.
December 3, 2009: Qof naftiis halige ah ayaa isku qarxiyey xaflad qalin jabin arday jaamacad caafimaadka Banadir waxbarashadooda dhamaystay, waxaa halkaasi ku dhintey 24 qof oo ay ka midyihiin 3 wasiir, dhaqaatiir iyo ardaydii qalinjabineysey, qaraxa waxa uu ku caanbaxay “Qarixii Shaamoow” maadaamaa uu ka dhacay Hotel Shaamoow.
May 1, 2010 : Labo qarax oo ka dhacay masaajid gudhiis suuqa Bakaaraha ayaa waxaa ku dhintey 30 qof, Alshabaab ma aysan sheeganin mas’uuliyadda, waxayna ku eedeeyeen shirkado shisheeye, balse ma aysan jirin wax cadayn ah oo ay soo saareen. Masaajidka waxaa khudbad ka jeedinayay Sheekh Fu’aad Shongole oo ka tirsan madaxda sarsare ee Alshabaab, dhaawac fudud ayaa soo gaaray.
Agoosto 24, 2010: Weerar lala eegtey Hotel Madina magaalada Xamar oo ay deganaayeen xildhibaano badan ayaa waxaa ku dhintey 32 qof, ilaa lix ka mid ah ayaa xildhibaano ahaa, rag hubeysan oo xirnaa dareeska ciidamada oo uu weheliyey qof miinaato ah oo naftiisa haligayay ayaa weerarka qaaday, waxaana mas’uuliyadda Sheegtey Alshabaab.
September 9, 2010 : Gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa ku qarxay illinka hore ee garoonka caalamiga ah ee Aadan Cabdulle Cusmaan ee caasimadda waxaana ku dhintey sagaal qof, waxaa meesha ka socdey shir heersare ah oo xagga amaanka looga hadlayay, kana qeybgalayeen madaxda AMISOM iyo saraakiil ciidan oo dowladda ka tirsan. Alshabaab ayaa sheegtey mas’uuliyadda.
Feberaayo 21, 2011 : Gaari uu wado qof naftiisa soo miidaamiyey oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa ayaa lagu qarxiyey saldhig Police oo caasimadda ku yaala, sideed qof ayaa ku dhintey, 35 kalana waa ay ku dhaawacmeen: Alshabaab ayaa sheegtey mas’uuliyadda.
June 10, 2011 : Qarax ka dhacay guriga wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxaa ku dhintey wasiirka wasaaradaasi, waxaa la sheegey in gabar qoyskiisa ka tirsanayd oo uu jaamacad u diri lahaa ay qaraxa geeysatay, Shabaabka waxa ay sheegeen in ay qaraxa iyaga ka dambeeyeen maadaamaa uu caqabad ku ahaa iskudayga xarakada ay ku dooneysay in ay ku afgambiso dowladda , Cabdishakuur Sheekh Xassan ayaa ka mid ahaa wasiiradda ugu firfircoonaa xukuumaddii Farmaajo.
Oktoobar 4, 2011 : Gaariweyn oo xamuul ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu qarxiyey wasaaradda waxbarashada halkaasi oo arday iyo waalidiintooda u safnaayeen deeq waxbarasho oo Turkiga laga heley, illaa 70 qof oo arday u badnaa ayaa ku dhintey qaraxa.
November 30, 2011 : Qof naftiisa soo miidaamiyey oo soo xirtey dareeska ciidamadda xoogga dalka ayaa isku qarxiyey xarunta ciidamada Soomaaliya, taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa sheegey in qofkaasi uu isaga beegsanayay in uu qaarijiyo, afar askari ayaa ku dhintey qaraxaasi.
December 6, 2011 : Qof kale oo naftiisa soo biimeeyeyey ayaa soo kaxeystey gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, wuxuuna diley afar qof kadib markii uu gaarigii isla qarxiyey. Police-ka ayaa qaraxa ka hor xiray ninkani balse siidaayay iyaddoo shuruudu ay ahayd in uu miinada uu rakibayay furfuro, balse ninkii waxaa u suuroowdey in uu riixo badhanka bambaanada kadibna uu qarxiyo.
Janaayo 24, 2012 : Gaari weyn oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lala eegtey xero ciidamada Ethiopia ay ku jireen magaalada Baladweyne , Shabaabka waxa ay sheegeen in qaraxaasi ay ku dileen 33 askari oo Ethiopian ah, balse Ethiopia ma aysan qirin tiradani.
Feberaayo 8, 2012 : Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo dabadeed qarxay ayaa lagu diley 8 qof, waxaana ku dhaawacmay labo xildhibaan, waxaana qaraxa sheegtey Alshabaab.
Maarso 14, 2012 : Qof naftiis halige ah ayaa isku qarxiyey gudaha Villa Soomaaliya, sedex qof oo uu ku jiro qofkii naftiisa haligey ayaa ku dhintey qaraxa
Apriil 4, 2012 : Gabar 14 jir ah oo loosoo xirey suun waxyaabaha qarxa ah ayaa isku qarxisey munaasabad ka dhacaysay tiyaatarka qaranka, waxaana ku dhintey 10 qof oo ay ku jiraan madaxda isboortiga qaranka, waxaa ku dhaawacmay labo xildhibaan iyo hal wasiir iyo toboneeyo kale oo shacabka ah.
Alshabaab waxa ay sheegtey in ay sii wadi doonto qaraxyadda.